Political Page ပုလဲသွယ်: History tells us ပုဂံရာဇဝင်
History tells us ပုဂံရာဇဝင်
ကိုးကွယ်ရာကူးပြောင်းခွင့်နဲ့ လူဦးရေတိုးပွားနှုန်းထိန်းညှိရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေမူကြမ်းတွေအပေါ်အမြင်
• တချို့အရာတွေကို ဥပဒေနဲ့ တားဆီးနိုင်တယ်။ တချို့ကြမရပါ။
• ‘ဥပဒေအထက်မှာ ဘယ်သူရှိသလဲ’ ဆိုတဲ့မေးခွန်း မရှင်းသေးပါ။
• ဒီဥပဒေကို ချိုးဖေါက်ရင် ပြစ်ဒဏ် ဘယ်လောက်ချမလဲ မသိပါ။ လူသတ်မှုကျူးလွန်ရင် ကြိုးမိန့်အထိချနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ လူသတ်မှု နည်းမသွားပါ။ ကုန်မသွားပါ။
• ဥပဒေလုပ်ထားပြီးပြီဆိုပြီး ကျန်တဲ့လုပ်သင့်တာတွေမလုပ်ဘဲ ရှိတတ်တယ်။
• ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ကြောင်း ဘယ်မှာ တရားဝင်တယ်လို့လုပ်ကြရသလဲ။ မြန်မာပြည်မှာ မိရိုးဖလာက များတယ်။ စာရွက်ပေါ်ရေးထားရင်ရပြီဆိုရင် အကြံအဖန်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။
• လက်ထပ်ချင်လို့ ဒီဘာသာဖြစ်တယ်လို့ စာရွက်ပေါ်မှာ လက်မှတ်ထိုးလိုက်တာနဲ့ကော ရသွားပြီလား။
• ကိုယ့်ဘာသာကို အလေးအနက် မထားသူတွေဆိုတာ ဘာသာတိုင်းမှာ အရေအတွက် အတော်ကိုများတယ်။
• ဘာသာဝင်အရေအတွက်များဘို့ လုပ်ကြတာမှာ ဘာသာကြီးတွေက နည်းလမ်းတွေ မတူကြပါ။
• ကနေ့ခေတ်မှာတော့ -
- ခရစ်ယမ်က ဆွဲဆောင်စည်းရုံးတာ များတယ်။
- ဗုဒ္ဓဘာသာက တရားဟောတာ၊ တရားပြတာက များတယ်။
- အစ္စလမ်က နည်းမျိုးစုံတယ်။ တချို့နေရာတွေမှာ အစွန်းရောက်နည်းတွေသုံးတယ်။ ဗုံးခွဲတယ်၊ စစ်တိုက်တယ်၊ သူပုန်ထတယ်။ ပိုလီယို ကာကွယ်ဆေးထိုးသူကို သေနတ်နဲ့ပစ်တယ်။ အခုဆို ကျောင်းသူတွေ ပြန်ပေးဆွဲတယ်။ သူတို့နည်းက ပိုထိရောက်သလား စောင့်ကြည့်ရမလို။
• ဘုရင်တွေကနေ အာဏာစက်နဲ့လုပ်ခဲ့လို့ ကနေ့အခြေအနေဖြစ်နေတာပါ။
- ‘အာသောက’ နဲ့ ‘အနော်ရထာ’ လို ဘုန်းတန်ခိုးအာဏာကြီးမားတဲ့ မင်းဧကရာဇ် ပေါ်ထွန်းလာရင်တော့ တမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။
- တရုပ်ပြေးမင်း ‘နရသီဟပတေ့’ လောက်နဲ့ မရနိုင်ပါ။
Posted by Dr. Tint Swe at 7:39 AM
Banaras မင်းမသိ ဗြဟ္မဒတ်၊ ပြည်မသိ ဗာရာဏသီ
Political fund in India အိန္ဒိယမှာ နိုင်ငံရေးပါတီတေ...
Irony အမြင်မတော် ဆင်တော်နဲ့ခလောက်
Neem ချိုတာလို တမာကိုထပ်မစိုက်ပါနဲ့
Once uponatime in 1990 ၁၉၉ဝ မှာ ပါခဲ့ဘူးတယ်
Wood and bamboo သစ်နဲ့ဝါး အားဖြစ်စေရမယ်
Distraction ကမ္ဘာ့ဖလား ကြည့်မလား
Signature is significant လက်မှတ်
Bangladesh Extremist Islamist Consolidation
Right brain, Right train ဘက်အမှန်မှာ ပါနေပါ
CIA and vaccine programs (စီအိုင်အေ) ရဲ့ ကာကွယ်ဆေး...
Your T-shirt is thirty သင့်ရဲ့ ‘တီရှပ်’ ရေဘယ်လောက်...
Mass power လူထုကြီး ကြွချီလာပါပြီ
Notaflat Space butaMass ပြားနေတဲ့ကွက်လပ် မဟုတ်...
Nine ကိုးနဝင်း မိုးလင်းမှသိမယ်
Civics ပေါ်လက်တစ်အစ စစ်ဗစ်က
Crazy names ‘နာမည်’ ကို ‘နံမယ်’ လို့လဲဖတ်ကြတယ်